Guddoomiyihii guddiga doorashada Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo is-casilay - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyihii guddiga doorashada Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo is-casilay
Guddoomiyihii guddiga doorashada Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo is-casilay
Garoowe (Caasimada Online) – Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa goordhoweyd is casilay, ayaga oo warqada istiqaalada u gudbiyay xubnaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland.
Guuleed Saalax, Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Puntland oo qoraal soo saaray kadib markii uu xilkaas iska casilay, ayuu ku sheegay in duruufo ka horyimid dartood uu goostay in uu baneeyo booskaas.
Xirsi Faarax ahna Guddoomiye ku-xigeenka guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa asagna is-casilaadiisa ku sheegay inay ku salaysan tahay duruufo amni u gaar ah, sida uu sheegay.
Labada mas’uul ayaa ahaa kuwii ugu sareeyay ee hogaaminayay guddiga doorashooyinka Puntland ee qabtay doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee ka qabsoomay qeybo kamid ah deegaanada maamulkaas. Guddigan waa midka u gaarka ah Puntland, ee ma ahan kuwii qabanayey doorashooyinka federaalka.
Hoos ka aqriso labada qoraal ee ay soo saareen Guuleed iyo Xirsi
Qoraalka Guuleed Saalax
Saaka waxaan ugudbiyay Xubnaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland warqad aan ku bannaynayo jagada Guddoomiyanimo ee Guddiga, sidoo kale isla saaka waxaan Guddoomiyaha Baarlamaanka la wadaagay warqad aan isaga casilayo xubinimaddii Guddiga ee aan kusoo shaqaynayay muddo 2 sano iyo bar ah. Waxaan qorshaynayay inaan qayb kasii ahaado shaqada adag ee Xubnaha Sare iyo Shaqaalaha Guddigu u hayaan bulshada reer Puntland, laakiin duruurfo iga hor yimid dartood waxaan goostay inaan banneeyo booska.
Qoraalka Xirsi Faarax